Dai 15, 2021 by billy16
Iyo nyowani Galaxy Book Pro 360 15-inch inoratidza kuti Samsung inogona kupa chimwe chinhu chitsva kune iyo laputopu yenyika, asi inogona zvakare kunge yakawandisa.
Samsung haisi mutorwa kune Windows malaptop, kunyangwe iine nguva yakaoma kunamatira nechero chigadzirwa mutsetse kana chirongwa chekupa mazita. Ini ndakatanga kudonha ayo akajairika mwenje dhizaini kumashure mu2017, pandakatenga ndikaongorora iyo Samsung Notibhuku 9 15 Ext, uye kubvira ipapo, kambani yakagara ichigadzira mafaro uye akasarudzika e-Ultra-nhare maPC.
Ye2021, Samsung inozopedzisira yawana tarisiro neayo mutsva weGlass Book Pro mutsara, iyo inouya muchinyakare dhizaini dhizaini kana inoshandurwa "360" imwe mune maviri akasiyana saizi.
Kuongorora uku kunotarisa paUS $ 1,500 Galaxy Book Pro 360 15, iyo yave kuwanikwa kutenga. Iine kuratidzwa kwayo kwakanaka kwe AMOLED, yakanakisa S Peni, uye inoshamisa robust software suite, Samsung iri kutamba yekuchengetedza. Asi iyo kambani zvakare ine kumwe kutarisa uko kunoisa iyo kunze kwekusvika kwehukuru. Neraki, mutengo wayo mukuru unobatsira kuudzikinura pakupedzisira.
Chiedza, chitete, uye chinyoreso
Chinonyanya kukosha: Iyo Galaxy Book Pro 360 ndiyo imwe chete yakatetepa-uye-yakajeka 15-inch inoshandurwa maPC pamusika iyo zvakare ine yakanakisa AMOLED kuratidza uye inking ruzivo. Iyo inotaridzika-inotaridzika, inonakidza kushandisa, uye ine mashandiro pazvinenge zvichidikanwa. Samsung iri mukati mekugona kweiyo yakakwana laptop dhizaini, asi inowira ipfupi.
Yakatanhamara kuratidzwa kwe AMOLED
Yakanaka inking uye chinoshandurwa chiitiko
Yakatetepa uye yakajeka ine basa rakanakisa
Bhabheri hupenyu hwakanaka
Inobatsira Samsung software
Inotyisa webcam, maspika asingatauri
16:10 ingadai yakave chiratidzo chiri nani
Zvizhinji zvezvigunwe zvine 'Mystic Navy'
Chete izere HD resolution yechiso
$ 1,119 uye kumusoro kuSamsung
$ 1,299 pa Best Buy
Samsung Galaxy Bhuku Pro 360: Mutengo, kuwanikwa, uye maficha
Iyo Samsung Galaxy Book Pro 360 (uye iyo isiri-360 modhi) yave kuwanikwa kubva kuSamsung.com uye Best Buy, nekutakura kunotarisirwa mukupera kwaMay uye kutanga kwaJune, zvinoenderana nekugadziriswa.
Unogona kusarudza pakati pe13.3-inch uye 15.6-inch mamodheru mune chero "360" chassis (inoshandurwa) kana yechinyakare dhizaini dhizaini, inova $ 100 yakachipa. Iko kune sarudzo dzeIntel Core i5 kana Intel Core i7 processor. Iko kune zvakare 5G sarudzo, asi inogumira kune iyo 13.3-inch Galaxy Book Pro 360 modhi uye haitarisirwi kuendesa kusvika gare gare zhizha rino.
Mitengo inotanga pa $ 999 yeiyo 13.3-inch Galaxy Book Pro uye $ 1,199 yeGlass Book Pro 360. Iyo 15.6-inch modhi yakaongororwa pano ngarava neCore i7 CPU, 16GB ye RAM, uye 1TB SSD ye $ 1,499.99.
Samsung inobvumidza kutengeswa kwemafoni, maPC, kana mapiritsi, ayo anogona kudzora kutenga kweGlass Book Pro / Pro 360 kusvika pamadhora mazana mashanu (kunyangwe iyo chete Samsung Tab S550 + inokodzera iyo poindi yemutengo, nemidziyo mizhinji ichidonha pazasi peiyo).
Galaxy Bhuku Pro 360 13
Galaxy Bhuku Pro 360 15
OS Windows 10 musha
Windows 10 Pro Windows 10 musha
Processor Gumi Gumi Intel Core i11
Gumi Gumi Intel Core i11 Gumi Gumi Intel Core i11
Gumi Gumi Intel Core i11
RAM Kusvika ku16GB LPDDR4x Kusvika ku16GB LPDDR4x
chengetedzo Kusvika ku512GB NVMe SSD Kusvika ku1TB NVMe SSD
kuratidza 13.3 inches
S Peni yekuinki 15.6 inches
S Peni yekuinki
5G SIM (sarudzo) Thunderbolt 4
Audio AKG vatauri
Dolby Atmos AKG vatauri
Kubatana 5G (sarudzo)
Wi-Fi 6E Yakagadzirira
MAKARALI USB 5.1 Wi-Fi 6E Yakagadzirira
kamera Mberi-yakatarisana ne720p Mberi-yakatarisana ne720p
chibatiso Fingerprint reader Fingerprint reader
65W AC adapta 68Wh
65W AC adapta
miganhu 11.9 x 7.95 x 0.45 inches
((302.5mm x 202mm x 11.5mm) 13.97 x 8.98 x 0.47 inches
((354.85mm x 227.97mm x 11.9mm)
uremu Mapaundi 2.29 (1.04kg) Mapaundi 3.06 (1.39kg)
ruvara Mystic Navy
MysticBronze Mystic Navy
Combo isina kujairika
Samsung Galaxy Bhuku Pro 360: Kugadzira uye zvinhu
Iyo Galaxy Book Pro 360 15 ndeyeIntel-based convertible Ultrabook iyo inosanganisira Samsung S Pen yekuinki uye kudhirowa. Iyo inoratidzira chiyero Makore i7-1165G7 U-akateedzana processor, inozivikanwa kune ese 13-inch Ultrabooks uye mashoma 15-inch mamodheru.
Laptop iyi ndeye Intel Evo yakasimbiswa, zvinoreva kuti yakagadziridzwa zvakanyanya kuti ikwanise-kuenderera, dzokazve, WiFi 6E, uye yakareba kupfuura avhareji hupenyu hwebhatiri.
Nepo diki 13.3-inch vhezheni iine kukwikwidza kwakawanda, iyo hombe 15.6-inch modhi yakaongororwa pano isingawanzoitika, sezvo mazhinji malaptop saizi iyi inowedzera mune yakasarudzika NVIDIA GPU, iyo isina laptop iyi. Pane kudaro, ichi chidiki, chakareruka Ultrabook iyo inogona zvakare kushandiswa nepeni. Musiyano uyu unoreva kuti Galaxy Book Pro 360 15 yakanakira kugadzirwa asi haina kukodzera kumitambo yakakomba kana kugadzirisa vhidhiyo (asi ichigona, chokwadika, kubata mutoro wakareruka mumapoka iwayo).
Dhizaini-kuchenjera, iyi chaizvo Samsung laptop. Sarudzo dzemavara - dzendarira dzebhuruu nebhuruu - dzinoenderana nhare dzayo dzeGalaxy uye dzinokwereta zvakawanda kubva kunharembozha yayo, chinova chinhu chakanaka. Nepo zvakavanzika zvebhuruu zvichitaridzika zvakanaka, ndizvo chaizvo yakakomberedzwa nemaoko emafuta, uye zvigunwe zvemunwe zvinoda kupukuta zvakapetwa kuti zvirambe zvichitaridzika sezvazvinoita mumifananidzo iyi. Kana uku kuri kunetsekana, iyo yakareruka isinganzwisisike yendarira isarudzo iri nani. (Ini pachangu, ini ndinowana iyo Galaxy Bhuku Flex's color uye dhizaini zvinogutsa, uye ndinoshuva kuti Samsung ingo gadziridza iyo modhi.)
Pane angori ma3.06 mapaundi (1.39kg) uye inoshamisa 11.9mm yakatetepa, iyo Galaxy Book Pro 360 inoshamisa mwenje uye inotakurika, tichifunga iyo 15.6-inch kubata kuratidza.
Zviteshi zvengarava zvinongogumira kune matatu chete USB Type-C neimwe (kuruboshwe) yakachengeterwa yepamusoro-kuita Thunderbolt 4. Iko kune, zvisinei, MicroSD slot yemazhinji-midhiya uye combo maikorofoni / headphone jack. Nepo chiteshi cheType-A chingave chakave chakanaka, iyo laptop yakatetepa kuti igare imwe.
Vaviri maAKG mutauri ane Dolby Atomos software ari pamucheto wezasi we laptop. Ivo vakurukuri vakanaka, asi kuiswa kwavo hakuratidzike sokwakanaka senge kumusoro-kupfura dhizaini uye kushomeka resonance uye mabass. Makambani akaita se HP anonyatsoisa masipika mana mumalaptop avo e "360" uye pre-amp iwo, saka ruzha rwacho rwakanaka mumamiriro epiritsi sezvakaita standard laptop. Nekudaro, pamwe nekuda kwekunetseka kwenzvimbo, Samsung yakatarisana nemiganhu yakaoma mukugadzira iyi laptop kuve mutete.
Iyo keyboard iri padivi rakadzika ne1mm chete yekufamba (1.3mm yakanaka). Asi nekuda kweiyo chigero michina uye dhizaini dhizaini dhizaini, zvinonzwa zvakanaka chaizvo kana uchinge waishandisa kwechinguva chidiki. Samsung inosanganisira matatu-nhanho yekuvhenekera mwenje, inoitwa zvakasarudzika mushe nemwenje mushoma kubuda ropa (zvakare ine yakanaka kupera simba). Izvo zvakakosha kuti uzive kuti vanoverengeka pad vanoda vanozofara nekhibhodi dhizaini mune iyo 15-inch futi.
FYI: iyo yeblue bhuruu inotora zvigunwe zviri nyore kwazvo.
Iyo trackpad yakakura kana ichienzaniswa nemamwe malaptop mukirasi iyi. Iyo inoshandisa Microsoft Precision madhiraivha uye ine bhatani rinogutsa neakasarudzika kumeso.
Iyo 720P cam haina kusimba.
Iyo yekumberi-yakatarisana ne720P kamera zvine nharo ndeimwe yeakaipisisa yandakamboshandisa mune ichangoburwa laptop, zvinoodza moyo kufunga nezveScams pedigree mune kamera optics. Mifananidzo yakajeka uye haina kumbopinza, ichiita musangano wekufona chiitiko chinoshungurudza. Iko hakuna zvakare kuzivikanwa kwechiso kuti upinde mukati Windows 10, asi Samsung inopa yakanaka yekuverenga minwe padhongi repamusoro panzvimbo.
Iyo yese-simbi chassis ine imwe inochinjika kwairi, asi hachisi chinhu chinotyisa. Tichifunga nezve dhizaini dhizaini uye zvinangwa zveiyi laptop, zvinogamuchirwa. Iyo yepazasi ine yakaringana yakakura yekudyira kutonhodza processor, uye kupera kunodzingwa kuburikidza neshure hinge nzvimbo, ichipa yakachena dhizaini. Chokwadi, iyo yakazara laptop inogona kurondedzerwa seyakanaka uye yehunyanzvi ichitarisa ine mashoma uye anenge akavanzwa Samsung yekumaka.
Samsung inosanganisira inopenga 28 yeayo maapplication, masevhisi, uye software tweaks muGlass Book Pro 360. Iyo pfungwa ndeyekudaidza iyi "bloatware," asi izvo zvingave zvisina kunaka. Software yaSamsung, iyo inowanzo kuve 1: 1 clone yezvinowanikwa pane ayo anozivikanwa mafoni eGPS, inzvimbo yekutengesa yeiyi laptop, kwete yakaipa. Iwo maapplication anosanganisira:
Vadivelu Comedy Clip Studio
Galaxy Bhuku Rakaitika
Galaxy Book Smart Chinja
Rutsigiro rwepamhepo (S Service)
Samsung Makaralı Sync
Samsung PC Yakachena
Samsung TV Uyezve
Samsung Izwi Cherechedzo
Samsung Chinovhara wezvaiitika
Zviri… zvakawanda. Asi zvinhu zvakaita seSamsung Security ngazvibvumirwe iwe digitally kukiya maikorofoni uye kamera kuitira kuti software igone kushandiswa kukusora. Iyo inogona kana kukutumira email iwe pikicha yemumwe munhu ari kuyedza kubvarura laptop yako (zvechokwadi). PENUP chirongwa chekupenda chevakuru, icho chinoita kuti iwe ushandise yakasanganiswa S Peni munzira inonakidza uye inozorodza. Maapplication akaita seGalari, maNote, TV Plus, Mhenyu Meseji, uye Mhepo Mirairo mifananidzo yegirazi yeSamsung maApple efoni maapuro uye anowanzoenderana kwavari kuburikidza neako Samsung account Live Wallpaper inoita kuti iwe usarudze mapamberi mapikicha ayo anoshanduka zvishoma zvichienderana nemamiriro ekunze azvino uye angave masikati kana husiku. Izvo zvese zvinhu zvine hungwaru zvinowedzera ruzivo rweLaptop. Ehe, izvo zvese zvinogona kusunungurwa, zvakare, kana iwe ukaona zvichikanganisa.
Samsung Galaxy Bhuku Pro 360: Ratidza uye inki
Kana paine imwe hombe yekutengesa nzvimbo yeGlass Book Pro 360, ndeye Samsung inozivikanwa AMOLED tekinoroji yekuratidzira. Kunyange AMOLED yakajairika kumaTV uye ikozvino mafoni emafoni, haina kujairika mumalaptop. Samsung yakaedza munguva yakapfuura neSuper AMOLED (sAMOLED) mune yayo 2018 GalaxyBook2, uye QLED mukati Galaxy Bhuku Flex, asi yakashandiswa yakajairwa TFT mune yayo ichangopfuura Guru Bhuku S.
AMOLED anorarama kusvika kune hype. Mune bvunzo dzedu, iyo Galaxy Book Pro 360 inounza yakasarudzika inomiririra mavara ne100% sRGB, 85% AdobeRGB, uye 96% DCI-P3 - ese ari munzira ari pamusoro pevhareji yekirasi iyi yekomputa.
Samsung zvakare inounza mamwe matanho akangwara, futi. Semuenzaniso, sekumusoro-kumagumo HP malaptop, iyo inoratidzira inogona auto chinja mavara profiles zvichienderana nechishandiso ("Akangwara Ruvara Injini"). Nekudaro, Adobe RGB inoshandiswa kugadzirisa mapikicha, nepo kana uchiona firimu, ichaenda kuDCI-P3 uye ishandise yakajeka kune zvimwe zvese. Zvakare, senge HP, pane "yekutarisa maitiro" iyo auto-inoderedza kumashure kuti ibatsire kuwedzera hupenyu hwebhatiri.
Iyo yeGlass Book Pro 360's inoratidzira inokatyamadza uye inoodza moyo pazere HD uye 16: 9.
VESA RatidzaHDR 500 inotsigirwawo, iyo inoita kuti bhaisikopo rione kuputika nehurefu hwepamusoro musiyano. Iyo skrini inotsigirawo yakafara-ruvara gamut (WCG) natively mu Windows, kusanganisira maapplication anoitsigira. Na "adaptive color," iyo laptop auto-inogadzirisa iyo vara inoenderana nemwenje (izvi zvakasiyana ne auto-kupenya, inova zvakare sarudzo).
Asi pane zvekutengesera, zvakare. Uku kuratidzwa kunongokwira pamatanho asinganzwisisike 286-nits ekupenya kwakanyanya (kana yaiswa ku0%, iyo skrini ndeye yakasarudzika kudzima 3.9 nits). Mazhinji malaptops mazuva ano akarova mazana mana, uye Samsung ndeyavo Galaxy Book Flex ine QLED inokwira pamakumi matanhatu nenhatu. Nekudaro, iyo Galaxy Book Pro 623 haina kunyanyisa uye, nekutenda mashandiro anoita AMOLED nemapikisheni akabatidzwa ega, anotaridzika kupenya kupfuura mazhinji malaptop uye anowirirana zvakanyanya.
Imwe nzvimbo inonetsa ndeye yakazara HD 1920 x 1080 resolution. Nepo kugadziriswa kwakadaro kuri kwakanaka pane 13.3-inch skrini, inosundira iyo miganho pane 15.6-inch imwe uko iyo AMOLED mapikisheni anoonekwa uye zvinyorwa zvakanyanyisa kupfuura zvasarudzwa. Hazvina kudaro zvakaipa, asi resolution ye "2K" pa1440p ingadai yakave nzvimbo yepakati yakanaka kwazvo. Sekuwedzera, iyo yakazara HD inobatsira kuwedzera magiraidhi kuita uye kuwedzera hupenyu hwebhatiri.
Kunge maTV eSamsung, iyo Galaxy Book Pro 360 ine glossy screen, asi nekuda kwekugadzirwa kwayo, inoratidza kusviba zvakanyanya kupfuura LCD, ichipa mhedzisiro inofadza uye yakadzikira zvakanyanya kudzika kupfuura mamwe malaptop akafanana.
Iyo inosanganisirwa S Pen yakatanhamara. Kunyangwe iyo Samsung peni tekinoroji mumalaptop isiri iyo yakanyanya kushandiswa seWacom AES kana N-trig (Surface), ini ndaizopokana kuti ndiyo yakanyanya kunetseka kwekunonoka uye kunyatsoita seyakajairika mushandisi. Iyo S Pen haidi kana mabhatiri kana kuchaja. Iyo yekudzikira ndeyekuti iyo S Pen ikozvino yave 2.5x mukobvu, inova yakanaka kune ergonomics, hapana nzvimbo yekukwirisa senge neiyo Galaxy Bhuku Flex. Pane kudaro, inogona kunamatira pachivharo nemamwe magineti, asi iko kuve nhema kunoita kuti zvive nyore kwazvo kurasikirwa muhomwe.
Kune avo zvakare vane Samsung Galaxy Note 20 (kana Cherekedza 20 Ultra 5G), iyo S Pens inochinjika uye inoshanda pamidziyo, inova yakanaka bhonasi.
Zvirinani kupfuura avhareji
Samsung Galaxy Bhuku Pro 360: Kuita uye bhatiri
Kuita kwakanaka kusinganzwisisike neGlass Book Pro 360, asi zvinoenderana nekuti unoshandisa sei.
Samsung yakashanda padhuze neIntel kuwedzera iyo Core i7-1165G7, uye inogona kuwana mimwe mibairo mikuru. Nekiyi kiyi (FN + F11), unogona kuchinja pakati peNo Fan, Silent, Optimized, uye High Performance modes. Idzi nzira dzakasununguka pane iyo Windows 10 bhatiri rinotsvedza rinowanikwa pama laptops akajairwa.
Kwete Fani modhi iri chaizvo uye uye ndiko kekutanga nguva pandakaiona muCore i7 laptop. Iyo Laptop inodziya kupfuura zvakajairwa (kunyange isingambo pisa), uye mashandiro akakwenenzverwa (akawanda-epakati mashandiro ari hafu), asi iyo inonakidza sarudzo yeMicrosoft Word kana kana iwe uchida kutarisa pane basa uye usingade chero ruzha. Silent mode inoita kuti fan iuye, asi zvishoma chete. Yakagadziriswa ndiyo yekumisikidza uye inogonesa iyo sisitimu kuti iwane chiyero pakati pebasa nekunyaradza. Iyo yepamusoro-yekuita modhi inobvisa magurovhosi uye inoita kuti mafeni aungurume kune iyo max. Inoshanda, zvakare, sezvo iyi Core i7 ichikomberedza mamwe malaptop ane iyo imwechete CPU.
Mukushandisa kushandiswa kwesofa pamubhedha (dandemutande, email, Twitter, Teregiramu, Slack, kutarisa mavhidhiyo) uye mune Optimized modhi, vateveri veGlass Book Pro 360 vaimboshandiswa pano neapo, asi vasingambo nyangadza. Laptop zvakare yakachengetedza tembiricha mukutarisa, uye pakanga pasina nzvimbo dzinopisa.
Kuita kweSDD kuri pakati nepakati (2,295 MB / s uye 1,234 MB / s akateedzana kuverenga nekunyora), asi hapana chinokatyamadza chero, izvo zvisinganzwisisike kufunga Samsung inoita mamwe emhando dzakanakisa (uye dzinokurumidza) maSSD anowanikwa. Iyo 1TB Samsung PM991a inowirawo pasi pazasi peiyo Galaxy Bhuku Flex ine PM981 SSD. Nepo PCIe 4.0 ingadai yakave yakanaka, inowanzo mhanya zvakanyanya kupisa ichiita yakashata yakashata yeiyi chassis.
Hupenyu hwebhatiri hwakanyanya kunaka nekuda kweiyo yakakura hombe 68WHr bhatiri (Surface Laptop 4 chete ine 46WHr imwe). Ikaiswa kune Samsung's 'yakakwana' maitiro ekuita uye ichishandisa iyo Galaxy Book Pro 360 yechiedza kune yepakati basa, yakaenzana kutenderera maawa gumi nemaminetsi makumi matatu pamutero wakazara. Samsung inosanganisira diki asi ine simba, Super Fast kuchaja-inogoneswa 10W AC adapter iri mubhokisi. Inogona kuendesa "maawa masere" ehupenyu hwebhatiri mumaminetsi makumi matatu chete ekuchaja, zvinova zvakanaka kwazvo kana uri mupiniki.
Chii chimwe chiri kunze uko?
Samaung Galaxy Bhuku Pro 360: Mukukwikwidza
LG gramu 17 (2021).
Iko hakuna zvakawanda zvinokwikwidza zvakananga neGlass Book Pro 360 15-inch semazhinji malaptops ane iwo ekuratidzira saizi ficha ine 35+ watt CPU uye kazhinji iri discrete NVIDIA GPU. Zvishoma zvinoshandurwa zvinotsigira inking, uye kunyangwe mashoma pane iwo ane yakazara manhamba pad pane iyo keyboard.
Iyo LG gram yakateedzana inomhanya mune akasiyana akasiyana saizi, kusanganisira 13, 14, 15, 16, uye iyo Giramu 17-inch. Ivo vese vari mukirasi imwechete seGlass Book Pro 360, zvisinei isingashandurike uye isina inki. Kunze ndiko kwekare (uye kazhinji kusipo) LG gram 14, inochinjika uye inorema chete 2.53lbs. Iyo nyowani (kunyangwe yakaoma kuwana) 2021 LG gram 16 16T90P iri zvakare inoshandurwa ine i7-1165G7 processor uye inoratidzira inosarudzika 16: 10 kuratidzira kweinenge $ 1,600.
Mashoma malaptop anokwikwidza zvakananga neGlass Book Pro 360 15-inch, iri kucherechedzwa.
Lenovo ane iyo Yoga 91 14, Iyo ine 14-inch yakazara HD skrini sekureva kwezita, asi zvakare iri Nice inoshandurwa iine yakafanana specs seSamsung.
The HP Spectre x360 15 iri zvakare imwe nzira yakakodzera, asi ndeyeimwe kirasi ine 16.9 4K UHD OLED kuratidza, Intel H-yakateedzana CPU, uye GeForce GTX 1650 Ti GPU. Iyo zvakare inorema 4.23 lbs (1.91kg), nemitengo ichitanga kutenderera madhora 1,250.
Iyo Microsoft Yepamusoro Laptop 4 inotsigira inking asi isiri-inoshandurwa laptop ine yakafanana specs. Iyo ine nani odhiyo uye yepamusoro resolution inoratidza, uye iyo 15-inch iri yakafanana kirasi seGlass Book Pro 360 15 asi iine AMD Ryzen CPU.
Pakupedzisira, Samsung ine iyo Galaxy Bhuku Flex ine yakanakisa QLED skrini, Qi charger mune iyo trackpad, yakadzoserwa peni, uye yakanaka dhizaini. Samsung zvakare ine iyo yeGlass Book Flex Alpha, Galaxy Book Flex2 Alpha, asi chete mune 13.3-inch mamodheru.
Ona mazano edu e akanakisa 15-inch malaptop kune mamwe mazano.
Unofanira iwe tenga iyo Samsung Galaxy Book Pro 360?
Ivo avo vanoda yakajeka yakasarudzika uye yakaonda 15-inch Windows Laptop
Varidzi veiyo Samsung Galaxy smartphone vanoda laptop
Vanhu vanoda nhamba yemapads
Avo vanoda kugadzirwa PC yechikoro, basa, kana zororo
Vanhu vanoda 15-inch inoshandurwa laptop inotsigira inking
Ndiani asiri wake
Vanhu vanoda discrete NVIDIA GPU (vhidhiyo edhita, mutambo)
Vanhu vanosarudza 16: 10 kuratidza
Iwe unoshanda kunze, unoda yakajeka screen
Iwe unoda masipika ane ruzha, kurira kukuru odhiyo
Unoda hupenyu hurefu hwebhatiri
Samsung yaunza imwe yakasarudzika laptop kune inowedzera yakazara PC nzvimbo, rinova risiri basa riri nyore. Iyo 15-inch Galaxy Book Pro 360 ine vakwikwidzi vashoma uye inozadza mukaha unonakidza mumusika weLaptop; zvinoti, akanyanya mwenje / mutete anotendeuka malaptop ayo zvakare anowana hupenyu hwakanaka hwebhatiri uye mashandiro.
Samsung yaita zvakanaka kwazvo pano, asi inogona kuita zvakanyanya zvakanyanya futi.
Samsung inotsamira zvakanyanya pane yayo AMOLED tekinoroji tekinoroji, sezvazvinofanira kuita. Icho chiratidzo chakanyatsojeka-chinowirirana chinowirirana neLG's LCD skrini yekururamisa kwemavara kune hapana munhu anoshamisika. Iyo S Pen inonakidza kushandisa, uye nepo Samsung iine akawanda akafanogadzwa-kuiswa maapplication, ivo vanosimudzira ruzivo rweiyi laptop, kunyanya kana iwe uchitova uine Samsung Galaxy smartphone.
Chokwadi, kana iwe uchitova neyako weGlassifoni, kubata iyi Laptop ndiyo yepedyo iwe yaunogona kusvika kune yeApple pachako yakasungwa zvakasungwa ecosystem. Pakati pemifananidzo yakagovaniswa, kugona kuyananisa, Zvinyorwa, SmartThings, S Pen ruzivo, uye mashandisiro eScams Akaundi, pane yakawanda yekudyidzana kwekushandisa. Kunyangwe maBuds eSamsung anoshanda zvirinani neiyo auto-yekubatanidza ficha yakasungirirwa kune yakasimbiswa yeBluetooth pairing kugona.
Samsung yekuverenga zvigunwe zvemunwe yakanaka.
Asi iyo Galaxy Book Pro 360 zvakare ine mimwe mikana yakarasika, kunyanya chiwoniso chechimiro. Muna 2018, ndakanyora indasitiri inoda sei kuchinjira kuna 3: 2 uye kubvira ipapo, Dell, HP, uye Lenovo vese zvishoma nezvishoma vakasundira kwairi uye 16:10. Iyo Galaxy Book Pro 360 haina musoro pa16: 9 uye 15.6-inches. Kana ichishandiswa sehwendefa reinki, iri refu uye yakatetepa, nepo 3: 2 zvishandiso zvinowirirana neruzivo rwepepa-yakavakirwa notepad ruzivo.
Zvimwe zvichemo zvinowira kune odhiyo, uko kwepasi-kupfura maspika kusati kwamboita, uye inotyisa webcam iri pazasi izvo Samsung inokwanisa kuita. Uye nepo yakazara HD ichibatsira neiyo hupenyu hwebhatiri, iyo 1440p "2K" sarudzo ye15.6-inches ichave chiitiko chiri nani, kunyanya sezvo malaptop mazhinji ari kusundira 4K UHD paiyi saizi.
Pakazara, zvakadaro, Samsung yakagadzira kwete chete inotaridzika-laptop ine zvimwe zvinozivikanwa senge isina fan fan, asi inozviita nemutengo unokwikwidza zvakanyanya, ichiita kuti ive nyore laptop kukurudzira. Uyezve, kana iwe usingade iyo inoshandurwa fomu chinhu, unogona kusevha $ 100 uye uwane yakajairwa isiri-360 dhizaini.
Samsung Galaxy Bhuku Pro 360
$ 1,199 paSamsung
Kana iwe uchida super-yakatetepa Laptop iyo zvakare inoshandurwa, iyo Galaxy Book Pro 360 ndeyako. Pane zvakawanda zvekuda kuuya mune gumi nematanhatu kana gumi neshanu mamodheru ane sarudzo 13G (15-inch), iine maOOLED ekuratidzira, makuru mabhatiri, uye anorema asingasviki 5lbs. Samsung's S Pen inosanganisirwa.
Samsung Galaxy Bhuku Pro
$ 999 paSamsung
$ 1,099 pa Best Buy
Samsung maLaptops matsva ari pasi pe12mm mutete, kurongedza AMOLED kuratidzwa, maIntel processor, uye iine hunyanzvi hwese hwazvino mubhodhi. Sarudza kana gumi nematatu kana gumi nemashanu masendimita emhando yebhuruu kana sirivha. Vanotanga kutumira muna Chivabvu 13.
Maoko neiyo Samsung Galaxy Book 2 Pro akatevedzana